Tresaka Archives - Page 124 sur 136 -
« HAFAHAFA… »
23/01/2017 admintriatra 0
Volamena 18 kilao indray no saika havoaka an-tsokosoko teny Ivato, ny sabotsy teo. Tra-tehaka avy hatrany ny mpivady teratany sirianina nitondra azy. Tsy nanan-kevitra ny hanao fanambarana mazava momba ireto volamena amina miliara ireto izy …Tohiny
21/01/2017 admintriatra 0
Mipoitra tsikelikely eny ihany ny marina! Sarotra afenina tokoa ny marina tahaka ny volamena latsaka am-bovoka tsy avelan’ny hasiny tsy hamiratra. Faran’ny omby hena, faran’ny rano Ikopa ary faran’ny teny ifanatrehana. Koa aleo hifanatrehana eto …Tohiny
«VONONA VE ?»
20/01/2017 admintriatra 0
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana ary efa hamarana vonjy maika ny fanisana ny mpifidy ny manam-pahefana voakasik’izany. Amin’ny faha-31 Janoary ho avy izao no hofaranana vonjy maika io lisitry ny …Tohiny
« MPITSANGATSANGANA »
18/01/2017 admintriatra 0
Tonga teny amin’ny kianjan’Ambohijatovo ihany ny antoko rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho an’ny fanorenana ifotony (RMTF) omaly. Mampanaotao foana tokoa re olona ity fitadiavan-tseza ity, ka na dia ho « henatra » aza no mety ho vokany …Tohiny